အရမ်းချစ်ဘို့ကောင်းတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ( ဒါဘဲနော် ချစ်ရမယ် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အရမ်းချစ်ဘို့ကောင်းတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ( ဒါဘဲနော် ချစ်ရမယ် )
အရမ်းချစ်ဘို့ကောင်းတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ( ဒါဘဲနော် ချစ်ရမယ် )
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Aug 1, 2011 in Copy/Paste | 30 comments
မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်ခြင်း
လွန်ခဲ့တဲ့ လတွေက ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးတွေ အတော်များများမှာ
ထိုင်းနိုင်ငံက လိင်ပြောင်းလဲခွဲစိတ်ထားတဲ့ ပထမဦးဆုံး လေယဉ်မယ်လေးရဲ့ အကြောင်းကို
ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ PC လေကြောင်းလိုင်းက
၂၀၀၇ခုနှစ် မစ်(စ်)တက်ဖနီဆုရ ပထမဦးဆုံး လိင်ပြောင်းလဲခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ သန်ရာလတ်ကို
အဲဒီအချက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ထိုင်းနိုင်ငံဟာ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေကို
ညှာတာထောက်ထား အသိမှတ်ပြုတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုလို့ အသိမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်၊
အဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက် တချို့သဘောမတူတဲ့ သူတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုကို ကျနော်သတိရနေပါသေးတယ်။
ဝေါအိတ်စ်ပို ၂၀၁၀ ကျင်းပတုန်းက အခမ်းအနားဦးဆောင် လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ ကျနော် စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအခမ်းအနားကို ကျင်းပဖို့ မတိုင်မှီလေးမှာ သူတို့အဖွဲ့တွေကို တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့ကို သွားပြီးတော့ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံကို လေးစားအသိမှတ်ပြုမှု အကြောင်းကို သွားပြီးတော့ သုတေသန ပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ပထမတစ်ချက်က ထိုင်းတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးပျူငှာတဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပြွန်မှု၊
နောက်တစ်ချက်က ထိုင်းအစားအသောက်နဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့
ထိုင်းနိုင်ငံက လေဒီဘွိုင်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဂျီမတွေဟာ လိင်တူချင်း ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ထင်ဟင်ပြနေတာတင် မကပဲ
ထိုင်းနိုင်ငံ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတယ်
ဆိုတာကို လူတိုင်း သတိပြုမိကြမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အခု ကျနော်ပြောနေတာကို သဘောမတူတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော ဘန်ကောက်မြို့က ဘယ်လောက်အထိ ဂေး ဆန်တယ်ဆိုတာ
တက္ကစီကားတွေကိုကြည့်လိုက် ပန်းရောင်တွေနဲ့ ပြည့်လို့နေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂေးတွေ ၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ဆိုရင်လည်း အတော်များများ
၀တ်လေ့ဝတ်ထရှိတဲ့ ကျပ်ညှပ်နေတဲ့ ယူနီဖောင်းတွေနဲ့ ဆိုတာကိုလည်း
ထိုင်းတစ်နိုင်ငံလုံး တွေ့မြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ကတော့ ကျနော်တို့ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာရဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့
Outlook မှာဆိုလို့ရှိရင် ဖီးချားစတိုရီအနေနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှု
အမျိုးမျိုးအကြောင်းကို ဆောင်းပါးရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဆောင်းပါးတွေဟာ လူဖတ်တော်တော်များတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုကတော့ Outlook ကနေပြီးတော့ Life ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ပြောင်းပြီး
ဆိုတော့ ဒီလိုက်ဖ်ထဲမှာလည်း လိင်တူချင်း ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ
ဘယ်တော့များ ပါလာမလဲဆိုတာကို စာဖတ်ပရိသတ်တွေက စောင့်မျှော်နေကြဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒါမှမဟုတ် မတူကွဲပြားတဲ့
လိင်ဝိသေသလက္ခဏာ အမျိုးမျိုးနဲ့ ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်
ထိုင်းသတင်းမီဒီယာလောကမှာ လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့
ပြောစရာအကြောင်းအရာ တစ်ခုအနေနဲ့ပဲ ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး ထိုင်းလူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့
ယဉ်ကျေးမှု အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့
ဘယ်တော့မှ ထင်ဟပ်ဖော်ထုတ်ပြလေ့ မရှိသလို ဒီလို လူတွေရဲ့ ဘ၀ ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်း
အသိမှတ်ပြု ရေးသားတင်ပြတာမျိုး မပြုလုပ်တတ်ကြပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာအဖွဲ့က အခုချိန်ကနေစပြီး
လတိုင်း တစ်လမှာ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း
သတင်း ဆောင်းပါး စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြသွားဖို့ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကို စတင်ချမှတ်လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဘန်ကောက်ပို့စ်ရဲ့ လိုက်ဖ်ကဏ္ဍကလည်း လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့
အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့တော့ ရှိပါတယ်။
ရက်တော့ အတိအကျ ကျနော်မမှတ်မိတော့ဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်က ဖြစ်ရပ်မှန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့
ပြင်သစ်ဒါရိုက်တာတယောက်က ကျနော့်ကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးခဲ့ပါတယ်။
သူမေးတာက ခင်ဗျားတို့ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းဌာနအနေနဲ့
အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ လိင်ခွဲစိတ်ပြီးထားတဲ့ ဂျီမလည်းမဟုတ်ဘူး။
ပြီးလို့ရှိရင် အောက်လွီတွေမှာ လိုက်ကနေတဲ့ ဂျီမလည်းမဟုတ်ဘူး။
အဲဒီလို ဒီနေရာတွေဟာ ဂျီမတွေ မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ သူများသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲမှာ
အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ ဂျီမတစ်ယောက်ယောက်ကို အင်တာဗျူးပြီး ထည့်ပေးပါလားလို့
သတင်းစာတိုက်ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ဒီအကြောင်းကို ရေးတဲ့သူက
ကျနော်ပဲဖြစ်နေတော့ ကျနော့်လက်ထဲကို အဲဒီစာ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတော့ အဲဒီတုန်းက ကျနော် ခေါင်းတော်တော်စားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ကျနော် လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့သူ ရှိနေပါပြီ။
အခုဏကပြောတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ လိင်ပြောင်းလဲခွဲစိတ်ပြီးတဲ့
လေယဉ်မယ်လေးရဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ထိုင်းလူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက
လိင်ကွဲပြားမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တန်းတူရေးကို စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ
အတော်လေး အမြင်ပွင့်လင်းလာကြပြီလို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီလိုလူတွေအတွက် နောက်ထပ် အခြားအခန်းကဏ္ဍတွေမှာလည်း
ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
သက်တံ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့။ ၂၇ရက်၊ ဂျူလိုင်လ၊ ၂၀၁၁ခုနှစ်။
ဘယ်လောက် ချစ်ဘို့ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းလေးလည်းဆိုတာ တွေးကြည့်ကြလေ
ဘယ်နေ ရာကို ဘယ် လို ချစ်ရ မှာလဲ ကွယ်……………………………….။
လေယာဉ်မယ်လေးရဲ့ မျက်နှာကတော့ တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်
ဘာတုန်းဟ… ဘာမှလည်း မတွေ့ရပါလား….
ဟုတ်ပ မနော ရေ ပထမ တခါ ၀င်ကြည့် တာ ဘာမှ မမြင် လို့ ဘယ်လို ချစ်ရမှာ လဲ လို့ ရေး လိုက်တာ။
မကျေနပ် လို့ နောက် တခါ ၀င် တော့ မှ ဂေး အမွန်း တင် နဲ့ တိုးတော့ တာပါ ပဲ။ပို့ စ် ရှင် ဆန္ဒ အတိုင်း ချစ် သတိထားပြီး ချစ်လိုက်ပါမယ်၊ A ကြောက် လို့ ။ဂေးတွေ က A အများဆုံးဖြန့် တယ် လို့ ကြားဘူးထားလို့ ပါ။
ဟေဟေ့ ပို့ စ် တခု တည်း ၂၀ ရ တာ တော့ အမြတ် ပဲ။
“A ကြောက် လို့ ။ဂေးတွေ က A အများဆုံးဖြန့် တယ် လို့ ကြားဘူးထားလို့ ပါ။”
(My knowledge is,
if somebody uses their aft organ (anus) during sexual intercourse,
then, there is no lubricant & this is the main cause of getting HIV)
But, I would like to query,
When having sexual intercourse,
Those ဖြတ်ဖောက်ချုပ် လေဒီဘွိုင်း use, whether their forward or aft organ ???
If they use forward organ ( transgendered one ),
The possibility of getting HIV is more or normal ???
May be, Sayar မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု or Dr. Moe Thida Soe or someone else
can answer this question. ;)
ချစ်ချင်ပါဘူ စိတ်ညစ်စရာကြီး ဒါမျိုးတွေတိုတောကြိုက်ဘူး
ဖြတ်ဖောက်ချုပ်လုပ် လိင်ပြောင်းပြီး လေဒီဘွိုင်းလုပ်တာ တော်သေးတယ် … ။ ရှိရင်းစွဲ ဖုံးဖိမရတာကို အတင်းပဲ မီးကလေ မီးကလေ လုပ်နေတာတော့ … ကြည့်ရတာ အံမ၀င်ဘူး … အရင်က ကလေးတွေနောက်ကြစကြတာ ကြားဖူးပါတယ် … xxx နဲ့ မမဆိုလားပဲ
xxx နဲ့ မမ
ဘယ်လိုပြေးခဲ့ရလဲ ပို့စ်တင်ပါဦး ဘီလူးကြီးရေ
ကိုယ့်အတွက်တော့ဒီသတင်းဟာဘာမှမထူးခြားဘူး။ဖတ်တယ်။သိတယ်။ဒါဘဲ။ ဂျော်နီအောင်ပုကြတော့ ဒီသတင်းအပေါ်မှာအတော်ဘဲဝမ်းသာအဲလဲဖြစ်နေပုံဘဲ။ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တော့……။အော်…။သူချစ်ရှာတာကိုး…….။
တော်တော်ကို ပြုပြင်ထားတာပဲနော် မထင်ရဘူး
မွေးရာပါ ဗီဇ ပဲကောင်းပါတယ်…။ ဒီလိုပြင်ထား တာကြီး သဘာဝလွန်းကို ချစ်ရမှာတော့ ပြုပြင်ထားတာဆိုတာကြီးကိုသိနေတော့ ချစ်ရမှာတော့ စိတ်မသန့်ချင်ဘူးပေါ့…။ ကိုခိုင်တို့ တစ်ခါတုန်းကပြောဖူးသလို အရုပ်မကို ချစ်ရသလိုကြီးပဲနေမှာပေါ့….။ သတိရစေချင်တာက မျက်နှာလေး ချစ်စရာကောင်းတာနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး ကို ဥက္ခော ပြုထားရမှာလား…။ ကျားဟာ ကျား မဟာမ ပေါ့…။ နော့
ကိုရင်က… အရုပ်အကြောင်းသေချာမသိပဲ စွတ်တင်နေတယ်..။
အရုပ်က.. လျှပ်စစ်ဓါတ်အပျော့စားပါ.. ပါတာမို့.. ပိုပြီး ဟတ်ထ်ထိတယ်လို့… ပြောရမယ်..။
နောက်ပိုင်း သိပ္ပံပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ… လိင်စိတ်ထုတ်လွတ်တဲ့..ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းကို.. ဆွပေး..ပိုကြွတက်စေတဲ့.. ဆေးတွေ.. ကရိယာတွေပါထွက်လာနေပြီမို့… ကျားကျား..မမတွေအတွက်တော့..ရင်လေးမိတာတွေရှိတယ်..။
သိသွားရင် … ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ
စဉ်းစားကြည့်တာတော့ အကြိုက်ချင်းတော့ မတူဘူး …:D
ဦးဦးမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုကကော ဒီလောက်ချစ်နေပုံထောက်ရင် သူတို့လိုပြောင်းချင်လို့လားဟင်…ဟိဟိ….:P
အဲဒါ မိုက်ကယ်ဂျော်နီ အောင်ပု ရဲ့ လက်ရှိဘ၀ ပုံ
သား က နံပါတ်၁ နော် ဟီဟိ
ဟယ် ဘယ်လို တွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲ။ဘုရားဟောအရဆိုရင်တော့ကွယ် ငရဲ လားကြမယ့်သူတွေပါလား
ဘုရားက အခြောက်ဖြစ်တာနဲ့ ငရဲလားရမယ်လို့ ဟောခဲ့လို့လား? ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်ပြောချင်တာနဲ့ ဘုရားနာမည်ကို ဆွဲမထည့်ပါနဲ့လား။
အောင်ပုယေ မေးပရစေဦး သူတို ပြောင်းလိုက်တဲ့ **** ဟာက သေသွားတဲ သူရှိကဟာလား အသက်ရှိနေတဲ့သူရှိကဟာလား ပြီးတော့ **** အဲဒါကြီးက လဲမဲ့သူရဲ့အသားအရောင် နဲ့ ကောတူပါမလား ပြီးတော့ သူ မွေးရာပါ6သိန်းတန်ဆိုလား (ဈေးဒီထက်ပိုရမယ်ထင်တယ်) အဲဒါ ဘယ်ရောက်သွားလဲ တရုတ်ကားထဲ ကလို ပုလင်းကလေးနဲ ဆေးရည်စိမ်ပြီး အမြတ်တနိုးကလေ သိမ်းထားတာလား
တစ်ခါက အီးမေးက ရလို့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက် ကနေ မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အထိ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတဲ့ ပုံတွေ မြင်ဘူးတယ်
အရင်ဆုံး ဖြတ်ထုတ်မဲ့နေရာကိုအရာပေးတယ် ၊နောက်ဖြတ်ထုတ်တယ် ၊ကျန်တဲ့သူ့အသားကိုမှ မိန်းမ အင်္ဂါပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် ချုပ်ထားတာ အစစ်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူအောင်ပေါ့
ထိုင်းကို ရောက်ရင် ဘယ်ဟာက မိန်းမ ဘယ်ဟာက ယောင်္ကျား ခွဲခြားနည်း သင်တန်းလေး တက်ထားအုံးမှပဲ … အကုန်လုံးက ဟိုဟာပြောင်း ဒီဟာပြောင်းနဲ့ ဘယ်ဟာကို ကြည့်ပြီး အထီး အမ ခွဲရမှာလား မသိဖြစ်နေမယ် စိုးလို့ပါ
November 2010 တုန်းက ygn ကဧည့်သယ်တွေလာတော shopping mall ကိုလိုက်ပိုပါတယ် ဧည့်သယ် ထဲက လူလတ်ပိုင်း၃၀ကျော်တယောက်က သူအမျိုးသမီးအတွက် Make up ဝယ်တော့ counter တခု မှာရှိတဲ ထိုတယောက် က လားလား နဲ့လာလုပ်ပြပါရော အဲဒါနဲ့ပါလာတဲ တခြားလူကြီးတွေကို uncle တို့အဲဒါ အတုဆိုတော လူကြီးတွေက ဘာအတုလဲ တဲ့။ မိန်းမအတု ဆိုတော့မှ သူတိုအားလုန်း တအန့်တဩ နဲ့ သူတို မခွဲတတ်လိုရ်တဲ့
ရောက်စကမခွဲတတ်ဘူး ကြာလာတော့ လမ်းလျှောက် တာရယ် စကားပြောတာရယ် ကသိသာတယ် လမ်းမလျှောက် စကားမပြောရင် တချိုက မိန်းခလေးထတ် ပိုလှတယ်
ဒီသတင်း ဧရာဝတီ blogမှာ ဖတ်ရပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးကို ပေးထားတဲ့ ပထမဆုံး မှတ်ချက်ကို သဘောကျလို့ ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
July 31, 2011 4:59 PM Reply
ဦးအောင်ဇေယျကို အထင်ကြီးမိတာ မှားပေါ့ ဂျီပုန်းနိုင်ငံကိုမှ သွားပြီးအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာကိုး နိုင်ပေမပေါ့။
ဂျော်လကီအုပေါင်ရေ နင်တို့လုပ်မှ အလောင်းဘုရားရော၊ ဘုရင့်နောင်ပါ သိက္ခာကျပဟ…